अकबरे खुर्सानीका यी अचुक फाइदा : यी रोग कहिलै लाग्ने छैन ! – कामना डेली
अकबरे खुर्सानीका यी अचुक फाइदा : यी रोग कहिलै लाग्ने छैन !
प्रकाशित मिति २०७५ आश्विन २९, सोमबार १८:०१
काठमाडौ । कसैलाई भान्सामा खुर्सानी नभई भाग नै रुच्देन । यसैले जहिलै खुर्सानी किन्न बजार जाने गर्दछन् । तपाईपनि खुर्सानी किन्न जानुहुन्छ भने याद राख्नुहोस् तपाईले छनोट गर्ने कुनै खुर्सानी अमृत हो भने कुनै विष हो । खुर्सानी खानू स्वास्थ्यका कारण राम्रो मानिन्न ।
चिल्लो पिरो कम गर्नुहोला भनेर चिकित्सकले भन्ने गर्नुहुन्छ । तर तपाई हामीलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ की चिकित्सकको रोजाई र स्वास्थ्य क्षेत्रले नै प्रमाणित गरेको कुरा यो छ की अकबरे खुर्सानी भने मानिसका लागि अति नै उपयोगी हो । जुन तपाई हाम्रै घरमा पाइने डल्ले अर्थात रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।
रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । पिसावको बिरामीलाई लाभदायक हुन्छ । हाडजोर्नी लगायतका दुखाइ घटाउछ । विशेष गरेर अकबरे खुसार्नी हालेर बनाइएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ । थकाइ पनि मेटाउछ । जनबाेलीबाट
७ सय ५० वटा हिराका टुक्रा जोडिएको नेपालका पूर्व राजाको श्रीपेचका यस्ता छन् विशेषता